UGigaba wahoxisa umzila weSAA: Ubufakazi – Bayede News
IGAMA likaMnu uMalusi Gigaba owayenguNgqongqoshe
by Bayede-News Posted on 1 July 2019 2 July 2019
UMnu uMalusi Gigaba
IGAMA likaMnu uMalusi Gigaba owayenguNgqongqoshe Wezamabhizinisi KaHulumeni beliphezulu kuleli sonto ebufakazini obethulwe phambi kweKhomishini kaMehluleli uRaymond Zondo engokugwamandwa kombuso.
Ubufakazi obuningi bebuveza uGigaba njengomuntu owayesetshenziswa futhi kubonakala ukuthi kukhona abamhleli ngobhongwane ngezinye zezinqumo ayezithatha ngenkampani yezindiza iSouth African Airways (SAA).
Ethula ubufakazi ngoMsombuluko onguMxhumanisi kwaSA Express uNkk u-Estelle Loock uveze ukuthi inkampani eyayizinze ePretoria i-EML Engineers and Construction eyayinikwe umsebenzi wokuhlinzeka amafutha ezindizeni yelulwa kanjani inkontileka yayo nenani lamafutha ngonyaka wezi-2017 okwaze kwagcina ngokuthi inkontileka ifinyelele ezigidigidini ezi-R2.4.
UNkk uLoock uthe i-EML yangena ngendlela engaqondakali kule nkontileka emuva kokuba iSA Express iqale ukuba nenkinga ngamafutha amabhanoyi esikhumulweni sezindiza esifundazweni iNorth West iPilanesburg Airport. Phambilini le nkampani yayisebenzela kulesi sifundazwe emuva kwesivumelwano esaba khona phakathi kwayo nenkampani yezindiza i-Airports Company of SA.
Utshele iKhomishini ukuthi wayenikwe umsebenzi wokuthola isisombululo enkingeni eyayikhona njengoba izindiza zakwaSA Express ezazisuka eKapa kwakumele zigcwalise amafutha ePilansburg ukuze zikwazi ukubuyela emuva eKapa, okwagcina ngokuthi kube nesixazululo ngokuhlukana kwemizila.
Eqhubeka nobufakazi ngoLwesibili uNkk uLoock uthe wacela ukuba anikwe uhlu lonke lwezindleko kwa-EML okwakuhlanganisa nokuthunyelwa kwamalitha angama-8 500 amafutha njalo ngesonto esuka eGoli eya ePilansburg. Uthe indlela abasebenza ngayo yabe isiguqukile sekukhona nomunye umzila ngesikhathi enikezela ngezinhlelo zabo zonke kophethe ukuthengwa kwezimpahla kwaSA Express uMnu uSam Vilakazi okunguye owayezoshayelela isipikili sokugcina asayine.
“Kwaba ngasekugcineni ngesikhathi izinhlelo zonke zokusebenza sezithunyelwa kwimeneja engangibika kuyo lapho kwaba yima ngiqonda khona ukuthi kwakukhona inkontileka esisayiniwe,” kusho uNkk uLoock. Le nkontileka okwakungaqondakali ukusebenza kwayo okwabe sekuzohlanganisa nokuthunyelwa kwamafutha nakwezinye izikhungo lapho iSouth African Airways yayinenkontileka yokuhlinzeka ngamafutha ngokungaphezulu ngamaphesenti angama-30 okwakuzokwenza ukuthi inkampani i-EML ikhokhelwe imali efinyelela ezigidini ezingama-67 ngenyanga.
“Inkinga ngalokhu ukuthi umsebenzi owawudingakala wawumbili kuphela. Lo msebenzi kwabe kungothinta ubuchwepheshe njengokufakwa kwamafutha nokuhlinzekwa kwawo esikhumulweni iPilansburg. Naphezu kwalokho, le nkontileka yayisihlanganisa zonke izikhumulo ezazisetshenzwa iSA Express, okuyinto eyabe ikhathaza. Ngangazi ukuthi kwakunesivumelwano neSAA esasithinta zonke izikhumulo ezingaphansi kuka-ACSA, kodwa zonke lezi zabe sezifakwa ngaphansi kwalesi sivumelwano,” kuchaza uNkk uLoock.
NgoLwesithathu kuqale ukufakaza owayeyisikhulu esiphezulu kwaSouth African Airways uNkk uSizakele Mzimela ubufakazi bakhe obebubhekwe ngabovu. Ebufakazini bakhe igama lowayenguNgqongqoshe Wamabhizinisi KaHulumeni ngaleso sikhathi uMnu uMelusi Gigaba beliphezulu. Utshele iKhomishini ukuthi uGigaba nguyena owayefaka ingcindezi yokuthi iSAA iwuvale umzila wezindiza zayo owawuphakathi kweGoli neMumbai ukuze kungene enye inkampani yezindiza iJet Airways.
Uthe kwaba nochungechunge lwemihlangano noGigaba nababemele iJet Airways nalapho iSAA yanikwa khona umyalelo wokuba baqede ngalolu daba. Phambilini owayengusihlalo webhodi lakwaSAA uNks uCheryl Carolus nowayenguNgqongqoshe kulo Mnyango ngaphambi kukaGigaba uNkk uBarbara Hogan batshela iKhomishini ngomkhankaso owawunendluzula owethulwa iJet Airways iwuqondise kuSAA, ifuna ukuba kube iyona ethatha umzila waseMumbai.
Ngokobufakazi babo, kwaba uGigaba owayebona ukuthi lesi sivumelwano sasizothela izithelo. Maphakathi nobufakazi bakhe ngoLwesithathu uNkk uMzimela uyilande emuva echaza ngomzila weSAA wezindiza ezisuka eGoli ziya eMumbai . Uthe ngesikhathi eqala esikhundleni sokuba isikhulu esiphezulu ngoMbasa wezi-2010 iSAA kwakuyiyona kuphela esebenzisa lo mzila, kodwa kwase kuvele kunezincomo ezenziwa ibhodi likaCarolus elalifuna kuqedwe lo mzila. Uthe kwaba yingesikhathi sekungena uGigaba lapho kwaqala khona izinkinga kule nkampani yezindiza.
Eqhuba uNkk uMzimela uthe ngaleso sikhathi amalungu eBhodi aqala akhombisa ukukhathazeka ngengcindezi eyayibhekene neBhodi ukuze lithathe isinqumo ngokushesha sokumisa ukusebenza kweSAA kulo mzila. Uthe isiphakamiso sasayinwa ngowayeyiMeneja Jikelele yokuhlanganiswa kwemisebenzi uNkk uJane Blake nowangena kulesi sikhundla emuva kwakhe uMnu uChris Smyth, kodwa uthi iBhodi laba nezinto eziningi elaziphakamisa.
“Noma kwakuyiqiniso ukuthi umzila waseMumbai wawungasayenzi inzuzo kodwa kwakunokukhathazeka kokuthi kwakungewona owenza kabi kakhulu uma uyiqhathanisa neminye. IBhodi lalingaqondi ukuthi kungani kunesiphakamiso sokuba kuvalwe lo mzila njengoba wawungcono kuneminye,” kusho uNkk uMzimela.
“Okunye ukukhathazeka kwakusekutheni kuneziphakamiso zokuthi lo mzila uchezukele kweminye ngokwesivumelwano esasikhona noJet Airways. Babuza ukuthi kungani kunguJet Airways kuphela okwakumele uchezuleke nakweminye imizila.”
Uthe uGigaba esethathe isikhundla kwabizwa umhlangano emahhovisi asePitoli zili-10 kuMasingana ngowezi-2010.
Kwababekhona kulowo mhlangano ngokusho kukaNkk uMzimela kakungumeluleki kaGigaba uMnu uSiyabonga Mahlangu, owayeyiPhini likaNgqongqoshe uMnu uBen Martins namalungu eJet Airways ayeholwa isikhulu esiphezulu uNaresh Goyal. Uthe wayezitshela ukuthi kwakuzoba iSAA kuphela eyayizohlangana noNgqongqoshe kudingidwe umzila waseMumbai nokuthi abantu bakwaJet Airways babengeke babe khona kulowo mhlangano.
“UGoyal wachitha isikhathi esiningi ekhuluma ngaye nokuthi wayebaluleke kanjani. wakhuluma ngokungenami kwakhe ngokuthi lolu daba lwalungakavalwa,” kusho unkk uMzimela.
Uthi uGigaba wayethule du ngesikhathi izikhulu eziphezulu zakwaSAA zithethiswa okwezingane ezincane uGoyal kwaze kwathi ngasekugcineni komhlangano waphakamisa ukuthi iSAA neJet Airways kumele baqhubeke nezingxoxo kuze kube bafinyelela esivumelwaneni ngokushesha.
“Kwadumaza ngoba uGigaba wayehleli kulo mhlangano njengomuntu othinteka ngqo kumasheya, kwakudingeka ukuthi okungenani asebenzise ithuba ukugcizelela ukuthi kwakubalulekile ukufinyelela esivumelwaneni okuyinto engase ngimtshelile yona,” kusho uNkk uMzimela. ISAA yagcina ifinyelele esivumelwaneni neJet Airways ngowezi-2013 ngokubambisana kweminye imizila, okwathi ngowezi-2015 iSAA yamemezela ukuthi izowushiya umzila ophakathi kweGoli neMumbai.
Izolo ubufakazi bethulwe uMqondisi wakwaBNP Capital uMnu uDaniel Mahlangu. IBNP Capital yinkampani owayengusihlalo wakwaSAA uNkk uDudu Myeni ayefuna kube yiyo ethulela iSAA imali. Utshele iKhomishini ukuthi zonke izinto zazenziwa kuphuthunywa nomeluleki kaGigaba ebatshela ukuthi abanyuse amasokisi ngoba isikhathi sesidliwe yinja.
Posted in Injolozela, Izindaba, Kuleli sonto kwelaboHlanga